छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा र पेनाल्टी को गैर-भुक्तानीको लागि ड्राइभिङ प्रतिबन्ध
तथ्याङ्क अनुसार, रूसी संघ को हरेक चौथो नागरिक यसको आफ्नै कार छ। हरेक वर्ष, चालक नयाँ बिल सरकार परिचय जो भेट्न बाध्य छन्। यो प्रत्येक दोस्रो मोटरहाक्ने व्यक्ति ट्राफिक नियम बेवास्ता कि विश्वास छ, र तिनीहरूलाई केही थाहा छैन। यो सम्भव बच्चा समर्थन भुक्तानी गर्न असफल लागि प्रतिबन्ध ड्राइभिङ छ? त्यहाँ यस्तो व्यवस्था छ?
बच्चा समर्थन र जरिवाना तिर्न विफलता लागि चालक अनुमतिपत्र गुमाउन: भ्रम वा वास्तविकता?
रूस मा यस वर्ष को जनवरी मा संघीय व्यवस्था N340 अभिनय गर्न थाले। ड्राइभिङ प्रतिबन्ध ऋणीहरूलाई - अब एक वास्तविकता हो। भएका मोटर चालकहरुलाई बच्चा समर्थन, को बकाया यातायात र प्रशासनिक उल्लंघन र अब जोखिम इजाजतपत्र बिना बायाँ भइरहेको। यस्तो आमूल उपाय सरकार कुनै दुर्घटना लिएको छ। यसलाई छन् कि चालक बीच ऋणीहरूलाई 30% भन्दा विश्वास छ। यसको बारेमा 400 हजार नागरिकहरु छ।
राज्य Duma अनुसार, भूल ऋण को एक विशाल संख्या फर्कन एक चालक अनुमतिपत्र अदालत निर्णय को कार्यान्वयन को प्रतिशत वृद्धि हुनेछ को deprivation मा व्यवस्था, साथै मद्दत।
कसले, ठ्याक्कै, अधिकार deprived हुन सक्छ?
बिल्कुल ठीक लाइसेन्स गुमाउन सक्छ जसले को प्रश्न संग फिक्री हरेक मोटरहाक्ने व्यक्ति। कुनै पनि चालक बस एक यात्री बन्न र वाहन नियन्त्रण गर्ने क्षमता गुमाउन चाहँदैनन् रूपमा यो, अचम्मको छैन। बिल N340 को लागि आवेदन मुख्य मापदण्ड को छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा हो।
तिनीहरूलाई मा ऋण 10 हजार वा बढी rubles गर्न मात्रा भने प्रतिबन्ध ड्राइभिङ सम्भव छ। यो कार्यकारी अधिकार लिन मोटरहाक्ने व्यक्ति अनुमतिपत्र टाढा गर्न सक्ने मात्र अदालत को आधिकारिक निर्णय पछि emphasizing लायक छ। तपाईं ध्यान गर्न आवश्यक छ कि अर्को महत्वपूर्ण कुरा - यो संग्रह को सिस्टम छ। तपाईं छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा को गैर-भुक्तानीको लागि suing भने, जो को राशि अनुमति स्तर भन्दा बढी छैन, प्रहरी अधिकारी अन्य ऋण र आफ्नो निर्णय आफ्नो कुल संख्या असर गर्नेछ लागि जाँच गर्न आवश्यक छ।
बिल मा नागरिकहरु केही विभाग लागि अपवाद प्रदान गर्दछ?
उर्दी मा अन्य बिल संग रूपमा N340 अपवाद र exemptions प्रदान गर्दछ। छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा को गैर-भुक्तानीको लागि ड्राइभिङ प्रतिबन्ध ड्राइभर आफ्नो परिवार र आफ्नो लागि एउटा प्रमाणपत्र प्रयोग भने गर्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि, एक मोटरहाक्ने व्यक्ति एक ट्याक्सी चालक छ भने, यो उर्दी लागू भएन। यो मामला मा, चालक गतिविधिको आफ्नो तरिका मा कागजात प्रमाण प्रदान गर्न आवश्यक हुनेछ भनेर जोड दिए गर्नुपर्छ। को bailiffs एक चालक अनुमतिपत्र वंचित गर्न कुनै अधिकार गर्नुको अर्को कारण परिवहन मोडतर्फ निवास हटाइएको छ। वाहन भने - मात्र सम्भव वाहन चालक र तिनको परिवार छ, कानून लागू भएन। एउटै अवस्था असक्षम ड्राइवरों छ।
एक चालक अनुमतिपत्र निलम्बन लागि प्रक्रिया कस्तो छ?
यो ड्राइभिङ प्रतिबन्ध रहेको छ कति मानिसहरूलाई आश्चर्य। नयाँ व्यवस्थाले ऋण को पहिलो बयान अदालत पठाइने भन्ने हो। यो सम्भव कुनै पनि तरिकामा चालक द्वारा रिपोर्ट थियो। यो पत्र हुन सक्छ, र मोबाइल, र पनि एउटा सन्देश ई-मेल द्वारा मा कल गर्नुहोस्। कागजात पनि जो भित्र ऋणी ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ अवधि निर्दिष्ट गर्दछ। सामान्यतया यो बारेमा पाँच दिन छ। ड्राइभर त्यसो गरे भने, त्यसपछि bailiffs एक चालक अनुमतिपत्र को deprivation मा निर्णय। अर्को दिन कार्यकारी अधिकारीहरु मोटरहाक्ने व्यक्ति निष्कर्षमा आयातित यो साइन इन गर्न आवश्यक हुन्छ। बित्तिकै उसले गर्छ रूपमा, कागजात शक्ति मा आउँछ र सही अस्थायी रूपमा अमान्य बन्न। गैर-अदालतले आदेश को मामला, सामुदायिक सेवा 50 घन्टा द्वारा punishable मा।
रिकभरी प्रक्रिया एक ड्राइभिङ लाइसेन्स को
मात्र बिल्कुल सबै जरिवाना को परिशोधन पछि चालक अनुमतिपत्र पुनस्थापित। कार अनुमतिपत्र ऋणी जरिवाना को भुक्तानीको लागि एक रसिद र धन को रसिद मा प्राप्तकर्ता देखि एक रसिद प्रदान गर्नुपर्छ सक्रिय। कागजात को प्रमाणिकरण पछि कानुनी अधिकारी को प्रतिबन्ध हटाउँदछ। यो जानकारी तत्काल राज्य यातायात सुरक्षा Inspectorate गर्न प्रसारित छ। ऋणी पनि वाहन ड्राइभिङ मा प्रतिबन्ध उचाल्न निर्णय प्रतिलिपि मा आफ्नो हात हुन्छ। यो पहिलो पटक पूर्व ऋणी अक्सर ट्राफिक वार्डेन सेवा जाँच गर्नेछ कि टिप्पण लायक छ। यो निर्णय सधैं तपाईंसँग हुनुपर्छ भनेर यस कारण लागि हो।
बिल मा अपवाद अन्तर्गत पतन जो कार्यहरू ऋणी अल्गोरिदम,
हामी पहिले भने जस्तै, बिल नागरिकहरु केही विभाग लागि अपवाद छ। तिनीहरूलाई लागि, छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा को गैर-भुक्तानीको लागि ड्राइभिङ प्रतिबन्ध कारण कुनै परिस्थितिमा गरिएका गर्न सकिँदैन। तपाईं विभाग को एक मा हिंड्न भने, निम्न जानकारी को लागि हो।
पहिलो चरण bailiffs बिल मा एक अपवाद तपाईंलाई ढाकेका छन् भनेर पुष्टि गर्छ जो कागजात, दिन हो। यो जसमा तपाईं जो कागजातहरू पुष्टि लागि प्रस्तुत छ ठीक निर्दिष्ट गर्न चाहनुहुन्छ आवेदन लेख्न आवश्यक पनि छ। यो सबै आवश्यक कागजी कार्रवाई नक्कली मा गर्न आवश्यक छ कि emphasizing लायक छ। एक प्रमाणित प्रतिलिपि अदालत गर्न भन्दा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र दोस्रो आफैलाई छोड्न। कागजात को पहिलो सेट हराउने यदि यो घटना मा आवश्यक हुनेछ।
को offender लागि दण्ड
ड्राइभर लागि सबैभन्दा डरलाग्दो सजाय - एक ड्राइभिङ प्रतिबन्ध। अदालत, हामी अघि भने छन् रूपमा, निर्णय उत्पादन, र त्यो क्षण देखि ऋणी एक वाहन चलाउनु हकदार छैन। सायद हरेक मोटरहाक्ने व्यक्ति सजाय को offender लागि बिल मा stipulated के सोच।
ड्राइभिङ ऋण लागि प्रतिबन्ध - यो दण्ड तिर्न नगर्ने ती लागि चरम उपाय छ। यो मोटरहाक्ने व्यक्ति 10 भन्दा बढी हजार rubles कूल ऋण संचित छ भने मात्र लागू हुन्छ। एक औपचारिक अदालतले आदेश ड्राइभर पछि, प्रतिबन्ध बावजूद, पाङ्ग्रा पछि बस्न भने, यो सुनाइसकेको गरिनेछ। बिल यस्तो ऋणीहरूलाई लागि उपाय को एक नम्बर को लागि प्रदान गर्दछ। कार्यकारी शरीर को विवेकमा, एक बेईमान चालक 15 दिनको लागि जिम्मा वा 30 हजार rubles को राम्रो मा लिइएको गर्न सकिन्छ, यो पनि कडा श्रम सम्भव वाक्य छ। आफ्नो अवधि 50 200 घण्टा देखि दायरा।
यो तालिका सही अगाडी फिर्ता गर्न सम्भव छ?
एक चालक अनुमतिपत्र को प्रारम्भिक deprivation - यो एक वास्तविकता छ। तर यो समय को अगाडी को ड्राइभिङ लाइसेन्स फिर्ता गर्न सम्भव छ? का थप विवरण यस मुद्दा हेरौं।
बिल्कुल अधिकार deprived थियो हरेक चालक, सकेसम्म तिनीहरूलाई फिर्ता प्राप्त गर्न चाहन्छ। प्रमाणपत्र फिर्ता गर्न, तपाईं पहिले लिखित आवेदन अदालत गर्न वाहन नियन्त्रण संभावना फेरि सुरु गर्न पेश गर्नु पर्छ। तथापि, यो केवल आधा वाक्य पछि सम्भव छ भनेर जोड दिए गर्नुपर्छ। तपाईंले लिनुभयो भने चालक अनुमतिपत्र पहिलो पटक होइन, आफ्नो अनुप्रयोग छलफल गरिनेछ। अदालत ऋणी सबै ऋण उपकारको साटो तिरे छ र हालको वाक्य लागि अपराधको प्रतिबद्ध छैन भने, सिर्फ मामला मा समय को अगाडी लाइसेन्स फिर्ता हुनेछ।
यो वाक्यको अन्तमा सही पुनः प्राप्त गर्न सम्भव छ?
धेरै मानिसहरू यो एक चालक अनुमतिपत्र को deprivation को अवधि समाप्त भएको छ भने लाइसेन्स फिर्ता गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर आश्चर्य। यो मुद्दा संग पर्याप्त मोटर चालकहरुलाई अक्सर एक वकील बारी। पछिल्लो अवधि ड्राइभर को irresponsibility संग, तर पनि कुनै परिस्थितिमा, बस जीवनमा उहाँलाई भेट नभएका मात्र छैन सम्बद्ध गर्न सकिन्छ। एक चालक अनुमतिपत्र को deprivation को अवधि समाप्त भएको छ भने र तपाईं तिनीहरूलाई फर्कन चाहनुहुन्छ, निम्न जानकारी को लागि हो।
पहिलो चरण जो त्यहाँ पहिचान छ, राज्य यातायात सुरक्षा Inspectorate लागू छ। त्यहाँ एक पासपोर्ट, चिकित्सा प्रमाणपत्र, छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा र आदेशले भुक्तानीको लागि एक चेक प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुनेछ। ड्राइभर एक महिना भित्र फिर्ता गर्ने अधिकार।
राज्य छोडेर एक ऋणी निषेध गर्न सक्नुहुन्छ?
बच्चा समर्थन भुक्तानी गर्न असफल लागि ड्राइभिङ प्रतिबन्ध - यो गम्भीर र समय-खपत प्रक्रिया छ। यो बिल nuances को किसिम को धेरै entails। अदालत निर्णय पछि ऋणी अझै पनि तिर्न र जिम्मेवारी इन्कार भने, अधिकारीहरू सबै देश छोडेर उहाँलाई प्रतिबंध लगान शक्तिहरु छन्। बच्चा समर्थन को बकाया छ भने छैन, नियमित कुनै पनि जरिवाना र उल्लंघन आफूलाई जाँच गर्न निश्चित हुन यो यस कारण लागि हो। हामी पहिले भने जस्तै, सबै पेनाल्टी सँगै थपिएका छन्।
यो न्याय चुनौती सम्भव छ?
हरेक चालक उहाँले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्ने हराएको विश्वास गर्दछन्। लगभग आफ्नो मामला प्रमाणित र यसलाई सम्भव छ कि छैन भनेर प्रश्न संग फिक्री सबैलाई पहिचान बिना बायाँ गर्न। चुनौती न्याय र ड्राइभिङ लाइसेन्स को deprived गर्न, तपाईं 10 दिन भित्रमा निर्णय पछि एक पत्र लेख्न पर्छ। मामला पुनर्विचार गर्न एक लिखित अनुरोध कार्यकारी सेवा पास गर्न आवश्यक छ। ड्राइभर अधिकार भने, निर्णय रद्द तिनीहरूले, यो विचार र हुनेछ। तथापि, यो एक राम्रो कारण र प्रमाण हुनुपर्छ भन्ने जोड गर्नुपर्छ। केही मानिसहरू थाहा छ, तर ऋणी बच्चा समर्थन भुक्तानी गर्न कठिन वित्तीय अवस्था जडानमा असफल यदि मामला मा, bailiffs उहाँलाई installments मा ऋण चुक्ता गर्न मौका दिनेछु। आय को कम स्तर पुष्टि गर्छ कि प्रमाण प्रस्तुत गर्न ड्राइभर प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ।
कसरी सजिलो फिर्ता सही?
हरेक चालक आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकेसम्म ऋणी चाहन्छ। यो मोटर चालकहरुलाई समस्या गर्न सजिलो समाधान खोजिरहेको छ कि यस कारण लागि हो। आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न तेज तरिका - दिन छ एउटा सरकारी गर्न घूस। हामी कडा यस विधिमा Resort छैन सुझाव दिन्छौं। जो ऋण को लागि एक चालक अनुमतिपत्र को deprivation मतलब बिल, को कार्यान्वयन, ध्यान दिएर नियन्त्रण गरिन्छ भन्ने तथ्यलाई। , लाइसेन्स फिर्ता अवैध विधिहरू प्रयोग गर्न मात्र फिर्ता गरेनन् छैन जोखिम, तर पनि कैद एक धेरै वास्तविक अवधि प्राप्त। यो पनि हाल को वर्ष प्राय पर्याप्त नेटवर्क केही मात्रामा भन्दा छिटो समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। कुनै पनि मामला मा, सेवा को यस प्रकार प्रयोग नगर्नुहोस्। अक्सर यी विज्ञापन तपाईं धोका र धेरै नगद अवैध हालतमा गर्न चाहने राखिएको crooks छन्। सबै ऋण तिर्नको लागि सकेसम्म - समय अगाडि मात्र तरिका एक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्न।
छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा को गैर-भुक्तानीको लागि अधिकार गुमाउन किनभने आफ्नै irresponsibility वा किनभने केही जीवन परिस्थिति को हुन सक्छ। तपाईं sued भने र अस्थायी रूपमा आफ्नो लाइसेन्स निलम्बन - निराश छैन। ऋण चुक्ता गर्न सकेसम्म प्रयास गर्नुहोस्। यस कारण तपाईं वाक्यको अन्त्यमा अघि फेरि एक वाहन चलाउनु सक्षम हुनेछ। हामी दृढता तपाईं समस्या मात्र वैध विधि समाधान गर्न सुझाव दिन्छौं।
के गर्ने? को कर्मचारी छैन समयमा ज्याला तिर्न गर्दैन। के कर्मचारी ज्याला तिर्न छैन भने
न्यायिक बहस - यो के हो?
पासपोर्ट को नयाँ पुस्ता
इस्टोनिया झण्डा र देश को अन्य राज्य प्रतीक
रूसी राष्ट्रपति। राज्य को टाउको को संवैधानिक र कानुनी स्थिति
औषधि "Ascoril"। व्यवसायीक र बिरामीको समीक्षा। निर्देशन
Guessing क्रिसमस रात: एसएलआर सत्य
कुकुर लागि चमकीले कलर। सुविधा र लाभ
लिमिटेड "911 क्रेडिट": समीक्षा, विशेषताहरू, सेवा र रोचक तथ्य
चाँदी ब्रीम - माछा अलवण
संयुक्त अरब एमिरेट्स मा बिदाहरू: उपयोगी जानकारी र सुविधाहरू मनोरञ्जन
इलाकाका - यो के हो? शब्द "इलाकाका"
प्रकाशक "Kuchkovo क्षेत्र।" इतिहास र रोचक तथ्य
सेन्ट पीटर्सबर्ग नदी र नहरहरुमा। डुङ्गा हिँड्नुभएको